Zava-pisotro natoraly mampiakatra filàna
« Sextoys » : Be mankafy ny vehivavy gasy
Na dia tsy resahana mivantana aza, vao mijery ny ao anatin’ny tambajotran-tserasera fotsiny dia isan’ny mandeha be ny fivarotana ireny « sextoys » ireny.
Hevitra 4 mampatsiro ny alin’ny Saint Valentin
Tsy amin’ny fetin’ny mpifankatia ihany no tokony hitady fomba entina manisy tsiro vaovao ny firaisana ara-nofo, fa isan’andro mihitsy, mba tsy hankaleo.
Ireo “position” sy ny tsirony avy
Maro karazana ireo paozy azo atao mandritra ny firaisana ara-nofo. Samy manana ny mampiavaka azy sy ny mampatsiro azy avy izy ireny. Santionany ireto entina aminao ireto.
Tsy tokony ho sakana tsy hanaovana firaisana ara-nofo ny hatsiaka ateraky ny ririnina. Ireto telo omena anao ireto, izay tsy voatery ho hisy alikaola, dia azonareo roa kely tanterahana any an-trano, hampiakatra ny filàna.
Mananasy sy sakamalaho
Ankoatra ny “gingérol” hita ao anatin’ny sakamalaho dia mitondra “antioxydant”, misoroka ny homamiadana, manala fanaintainana izy. Mitondra vitamina C kosa ny mananasy sy miady amin’ireo fihitaran’aretina mety hitranga.
· Mananasy 100 grama
· Sakamalaho voakiky iray
· Rano 325 mililitatra
· Siramamy mena 20 grama
· Ranom-boasarimakirana 3 tete
Rehefa voavaofy sy voatapaka avokoa ny mananasy dia “mixé”-na. Asiana rano ary averina potsehina indray. Tantavanina tsara. Rarahana siramamy sy ranom-boasarimakirana. Ampangatsiahana kely mandritra ny adin’ny roa vao sotroina.
« Framboise » sy kakaô
Mampiakatra ny tahan’ny « serotonine » sy ny “endorphine” ny kakaô. Rehefa miakatra ireo dia mora mandray, mora taitra ny vatana.
· Ranom-boankazo paoma 240 mililitatra
· Ranom-boankazo “framboise” 240 mililitatra
· Ranom-boasarimakirana 20 mililitatra
· Tantely 10 grama
· Kakaô mangidy 2 grama
Afangaro ao anaty “shaker” avokoa ireo fangaro rehetra ireo. Hontsanina tsara ary apetraka amina toerana mangatsiatsiaka mandritra ny adin’ny iray. Mialohan’ny hisotroina azy dia rarahana vovoka kakaô ny vera.